प्रधानमन्त्री ओलीको कडा प्रश्न, ‘कहाँ सलबलाए ज्ञानेन्द्र शाह ? कुनै मन्दिरमा गएको सलबलाएको हो र ?’
विषेश अन्तरवार्ता (भिडियोसहित)
निशान न्युज भाद्र १६, 2077
अब कार्यदलको कुरा गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसमा विधिको कुरा आएको छ, प्रक्रियाको कुरा आएको छ । विधानको कुरा आएको छ । पद्धतिको कुरा आएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सरकार चलाउँदा पार्टीको कुरा सुन्दै नसुनेको, प्रचण्डजीले भनेको टेर्दै नटेरेको कुरा पनि आएको छ ....।
पहिलो कुरा हाम्रो प्रणाली कस्तो हो भन्ने थाहा पाउनु पर्छ । यो एकखालको र अलिक नयाँ खालको संसदीय प्रणाली नै हो । अलिक नयाँ खालको, यसमा संसदीय प्रणालीका विशेषताहरुमा केही थप विशेषताहरु मिसाइएका छन् । समानुपातिक प्रणाली आदि कुराहरु मिसाइएका छन् । तर, फेरि पनि यो संसदीय प्रणाली नै हो । संसदीय प्रणाली कसरी चल्छ भन्ने दुनियाँको अभ्यास छ, हाम्रो पनि अभ्यास छ । त्यसो भएर हाम्रा अभ्यासहरुमा के बुझ्नु पर्छ भने पार्टीले नीतिगत निर्देशन दिने हो । पार्टीसँग परामर्श हुन्छ । तर, कुन नेताले के भनेको छ त्यहीँ नेताले भनेकै मान्दा सरसल्लाह भयो, पार्टीको आदेशअनुसार भयो, नमान्दा भएन भन्ने हुँदैन । पार्टीको विधिवत कुनै एउटा निर्णय मबाट उल्लघंन भएको कसैले अहिलेसम्म देखाओस्, त्यस्तो कहीँकतै भएको छैन । पार्टीको कुनै निर्णय उल्लघंन भएको छैन र हुँदैन । अर्को, पार्टीले केचाहिँ निर्णय गर्ने, केचाहिँ निर्णय नगर्नेभन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा, संसदीय प्रणालीमा जो प्रधानमन्त्री र सरकार प्रमुख हुन्छ कार्यकारी प्रमुख हुन्छ, त्यस प्रणालीका आफ्ना तरिकाहरु हुन्छन् । ती त यस प्रणालीअन्तर्गत एक ढंगले यूनिर्भसल तरिकाहरु छन् । प्रधानमन्त्री भनेको अन्त गरिएका निर्णय, अरुले गरिदिएका निर्णय क्याबिनेटमा लगेर रबरस्ट्याम्प लगाउने वा छाप मार्ने ठाउँ मात्रै होइन अथवा प्रधानमन्त्री भनेको सेरोेमोनियल होइन । कार्यकारी हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
तर, यो प्रतिवेदनले त प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउन खोज्यो नि त ? पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने भनेर भनेको छ नि ? पार्टीको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढ्ने, पार्टीले सरकार चलाउनेआदि भनेको छ ...।
पार्टीको सरकार हो । पार्टीले नीतिगत ढंगले सरकार चलाउँछ, तर सबै गर्दैन । नत्र मन्त्रिपरिषद् किन चाहियो त ? पार्टीको स्थायी कमिटी सचिवालय भए भएन ? मन्त्रिपरिषद् किन चाहियो त ? अनि पार्टी अध्यक्ष भए भइहाल्यो, प्रधानमन्त्री किन चाहियो ? प्रधानमन्त्री एकजना हुन्छ । अध्यक्ष मण्डल पार्टीमा बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री मण्डल बन्दैन । अध्यक्षद्वय बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीद्वय हुँदैन । राष्ट्रपतिद्वय हुँदैन । त्यसकारण पहिलो त हामीले सिस्टम बुझ्नु प¥यो । पहिले सिस्टम अफ गर्भनेन्स् के हो भनेर बुझ्नु प¥यो । निर्णय कहाँबाट हुन्छ र कसरी हुन्छ ? यस प्रणालीमा त्यो थाहा पाउनु प¥यो । प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्छ । सबैका कुरा सुन्छ । राय लिन्छ । बाहिर बुद्धिजीबीहरुसँग लिन्छ । सरोकारवालाहरुसँग लिन्छ । स्टेकहोल्डरहरुसँग लिन्छ । परामर्श थुप्रैसँग लिन्छ । मैले परामर्श अरु दलहरुसँग लिने गरेको छु । प्रतिपक्षी दलहरुसँग लिने गरेको छु । अरुसँग पनि लिने गरेको छु । र, ती सबै कुराहरुलाई लिएर फेरि पार्टीमा परामर्श गर्ने गरेको छु, छलफल गर्ने गरेको छु । अब सरकार र पार्टी एउटै होइन । त्यहाँनेर भिन्नता छ । त्यस भिन्नताअनुसार चल्छ । यो कुरा हामीले थाहा पाएर नै अगाडि बढ्नु पर्छ ।
– पहिलो त, यो प्रतिवेदन के हो भन्ने कुरा बुझ्नु प¥यो । यो पार्टीको विचारधारात्मक दस्तावेज वा महाधिवेशनको प्रतिवेदन होइन । यसलाई पास त किन गर्न नसक्नु ? पास त सबै ठाउँमा हुन्छ । तर यो त्यसरी पास गर्नुपर्ने प्रतिवेदन होइन । यो अहिलेको समस्या समाधानको लागि, अहिले जुन समस्या अनावश्यक ढंगले देखा परे । यस्तो समस्या देखा नपर्नु पर्दथ्यो, यो दःखद पक्ष हो । यस्तो समस्या देखा पर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । तर व्यक्तिगत कारणहरु होलान् व्यक्तिका आकङ्क्षाका प्रश्नहरु होलान । आकङ्क्षाका प्रश्नहरुलाई पार्टी र सरकार संचालनका प्रश्नहरुसँग जोडेर त्यहाँ व्यवधान पुग्नेगरी देशको कार्य संचालन, सरकार संचालन वा सिंगै पार्टी संचालन र एकताको प्रक्रियामा व्यवधान पुग्नेगरी आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षालाई बढी महत्व दिएर त्यस्ता राष्ट्रिय प्रश्नहरुमा, राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा, जनसरोकारका विषयहरुमा र आम जनताका हितका विषयहरुमा कुनै प्रकारको व्यवधान पुग्नेगरी कोहीपनि चल्नुहुँदैन । प्रश्न यो हो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको बीचमा एकता गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि तपाईंले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । एकताकोे सूत्रधार तपाईं र प्रचण्ड पनि हो । अब यो पार्टी फुट्दैन भनेर जनतालाई तपाई आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ ? एक भएर तपाईंहरु सधैका लागि अगाडि जान सक्नुहुन्छ, आउँदो महाधिवेनसम्म ?
अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन चैतमा हुने भनेर भनिएको छ । त्यो कति समभव छ, हेर्न बाँकी छ । किनभने, कोरोनाको कहर कसरी अगाडि बढ्छ ? त्यसपछि मात्रै एउटा निर्णय होला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू । अहिलेको अवस्थामा तपाईं र प्रचण्डको बीचमा सहमतिकै साथ अगाडि जाने एउटा सहमति भएको छ । हस्ताक्षर तपाईं दुबै अध्यक्षले गर्नुभएको छ । पार्टीको महाधिवेशनपछि नेतृत्वको चयन पनि सहमतिकै आधारमा हुन्छ ? महाधिवेशनपछि प्रचण्ड नै अध्यक्ष बन्नुहुन्छ पार्टीको कि तपाई बन्नुहुन्छ फेरि पनि ?
– मेरा तर्फबाट उहाँसँग केही पनि छैन । अब बाँकी कुरा उहाँलाई नै सोध्नुस् न ! मेरो तर्फबाट केही पनि छैन ।
अहिले बीचमा कुनैे पनि मुख्यमन्त्रीहरु परिवर्तन हुने सम्भावना छैन ?
वामदेव गौतमलाई तपाईले विशेष जिम्मेवारी दिदै हुनुहुन्छ भनेर नेपाली राजनीतिमा चर्चा, परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू । तपाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको, बुझेको राजनेता हो । उहाँले कुनै जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ ? राष्ट्रिय सभामा लिएर जादैँ हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ? त्यो समभावना छ ?
कोरोनाका संक्रमित विरामीलाई अब कुनै समस्या हुँदैन, उपचार भरपर्दो रुपमा हुन्छ ? सबै किसिमको व्यवस्था सरकारले गर्नसक्छ ?
– होइन, परिवर्तन त्यस्तो संरचनामा गर्नुपर्ने होइन । नयाँ केही संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने, इक्युपमेन्ट थप्नुपर्ने र अरु स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई त्यसमा तालीमका साथ डाइभर्ट गर्नुपर्ने केही थप प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, त्यसबाहेक अर्को कुनै पृथक प्रणाली, पृथक विधि वा त्यस्तो अलग रणनीति ल्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाईचाहिँ लागेको छैन । यिनै चिजहरुलाई जस्तो आइसोलेसन हामीले भनेका छौं । म जनतालाई, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दूरी कायम राखौं । कमसेकम दुई मिटरको दूरी कायम राखौं । अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गरौं । अहिले हामीले दुई मिटरभन्दा बढीको दूरी कायम राखेका छौं । एकजना तपाईंले मास्क लगाउनु भएको छ, त्यसकारण मैले मास्क खोलेको छु । एकजनाले लगाउँदा यो अलिकति प्रोटेक्टिभ भयो । दुई जनाले लगाउँदा अझ प्रोटेक्टिभ हुन्छ । यो दूरीमा पर्दैन भन्ने कुरा हो । अर्को तपाईं पनि स्वस्थ नै हुनहुन्छ, म पनि स्वस्थ छु । नत्र सामन्यतया अलिकति नजिक जानुप¥यो भने, अथवा कुरा गर्दा, बोल्दा र स्वासप्रश्वास गर्दा आएका छिटाहरु अथवा केही बबलहरु उडेर जाने स्थानसम्म छ भने त्यस्तोमा होशियार हुनैपर्छ । यसमा साबुनपानीले हात धुने महत्वपूर्ण कुरा हो । यी कुराहरु गरिएको छ र अर्को कुराचाहिँ मैले भन्ने गरेको छु, औषधीय गुणयुक्त खाना हामीले खाने गरेका छौं । त्यसमध्ये केही चिजहरुमा यस्तो परिस्थितिमा अलिक बढी जोड दिने गर्नुपर्छ । मैले यो भनेको छु । जस्तो के भने तातोपानी र बेसार प्रयोगमा...।
– आइस नै जमेको थिएन के को ब्रेक हुनु ! आइस जमेको भए बे्रक हुन्थ्यो । मानिसहरुलाई के प¥यो भने यो हाम्रो भूमि जो सुगौली सन्धिले काली अर्थात् महाकालीपूर्वको जमिन हाम्रो जमिन हो भनेर तोकेको छ छुट्याएको छ । सन् १८१६ देखि १९६२ सम्म १४६ वर्ष त्यो जमिनको हामीले भोगचलन पनि ग¥यौं । यातायात थिएन, संचार थिएन, त्यस्तो बेला, त्यस्तो जमानामा हामीले भारत–चीन युद्धका बेलासम्म निरन्तर भोगचलन ग¥यौं । भारतले चीनसँगको युद्धका बेला कालापानीमा फौज राखेछ । त्यो धेरै पछि मात्रै नेपाललाई थाहा भयो । किनभने, यातायात थिएन । संचार पनि थिएन । मिलिट्रीको संचार थियो भनेपनि उहाँहरुको मिलिट्री त्यहाँ बसेको थियो । हामीलाई थाहा भएन । त्यसकारण २०२६ सालमा उत्तरी चेकपोष्टमा, चेकपोष्ट भनेर हाम्रो उत्तरी सीमानामा भारतले मातृकाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा जुन सम्झौता गरेर १७ वटा चेकपोष्ट खडा गरिएको थियो, मिलिट्री चेकपोष्ट उत्तरी सीमानामा यसरी राखिनु एउटा लज्जाजनक कुरा थियो । हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको लागि त्यो लज्जाजनक कुरा थियो । त्यस विषयमा कुरा उठाइयो र २०२६ सालमा ती चेकपोष्ट फिर्ता गए । त्यसबेला कालापानीको चर्चा कसैले पनि गरेन । चर्चा नगरेको हुनाले रह्यो, नत्र ती १७ वटा २००८ सालमा राखिएको थियो भनेँ त्यसभन्दा पछि राखिएको यो २०२६ सालमा अरु फिर्ता गर्दा भर्खरै राखिएको बाँकी रहनुपर्ने हुदैनथ्यो । यो फिर्ता गर्न धेरै गाह्रो थिएन । सन् १९५२ मा राखिएको सकियो फिर्ता गर्न भने ५२ मा राखेको सकियो फिर्ता गर्न भने १९६२ मा राखिएको नसक्ने त कुरा थिएन, सकिन्थ्यो नै । तर, त्यसबेला यो कुरै उठेन । त्यसकारण १७ वटा पोष्ट फिर्ता भए, एउटा बाँकी रह्यो । यो भूभागको विवाद कुनै आवेश, उत्तेजना र कसैसँगको वैरभावको कुरै होइन । यो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतप्रतिको कुनै हाम्रो निहुँ खोजाइ हो र ? हाम्रो कुनै नचाहिने तर्क हो र ? हामीले नयाँ निकालेको विषय हो र ? हुँदै होइन । यो विषय अगाडिदेखि नै थियो । हामीले अलिकति चर्चा गर्दै आएका थियौं । तर, जब भारतले आँठौं संस्करण भनेर नक्सा निकाल्यो । त्यसमा हाम्रो जमिनसमेत सामेल गरेर निकालेपछि हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठायौं ।
यो हाम्रो जमिनसमेत समेटेर निकालिएको नक्सा उपयुक्त भएन, हामीलाई मान्य छैन र हामी यसको समाधान वार्ताद्धारा गर्न चाहन्छौं, अबिलम्ब वार्तामा बसौं भनेर भन्यौं । हामीले यस्तो सन्देश पठायौं । पाँच महिनासमम त्यसको जवाफ आएन । बरु आयो बाटो उद्घाटनको कुरा । फेरि हामीले पठायौं, यो उपयुक्त भएन हाम्रो भूमिमा बाटो बनाउने, उद्घाटन गर्ने, हाम्रो भूमिसमेतलाई प्रयोग गर्ने कुरा र बाटो बनाउने कार्य उपयुक्त भएन । हामी संवाद गरौं भन्यौं । े लगातार हामीलसंवादबाट समाधान गर्न खोज्यौं । अझ हामीले नक्सा छाप्न पनि हतार गरेनौं । वार्ताबाटै समाधान गरौं, वार्तामै कुरा राखौं भन्यौं । वार्ताबाटै भइहाल्छ भने नक्सा छाप्नतिर नलागौं भनेर पर्खियौं । हामीले हतार गरेनौं । तर, त्यसको पनि जवाफ नआएपछि हामीले नक्सा छाप्यौं ।
होइन, त्यो भूभाग त फिर्ता ल्याउनु पर्छ । नेपाली जनताको माग छ । तपाईंलाई तीन करोड नेपाली जनताको समर्थन छ । पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीले सबै पोलिटिकल पार्टीको साथ पाउनु भयो, संविधान संशोधनमा नेपालमा अभूतपूर्व एकता कायम भयो...?
–इतिहासमा कहिल्यै कसैले बनाउनुपर्छ भन्ने पनि नसोचेको ठाउँमा अहिले काम भइरहेको अवस्था छ । जस्तोकि छाङरु–टिंकर जाने बाटो जो पहरै पहरा छ, त्यसलाई खोलेर अहिले बाटो बनाइदै छ । कम्पिलिट हुन अलिकति बाँकी छ । अझै अलिकति पूरा भएको छैन । बाटो बनाउन थालेपछि अब मान्छेहरु त्यहाँ जान सक्ने त भयो । त्यहाँ गएर तमासासँग फोटो खिच्ने, तमासासँग विरोध गर्ने, त्यहाँ कोही मान्छे उभ्याउने अनि यस्तो हालत छ, के हे¥यो सरकारले भन्ने गरेको पाइन्छ । अहिलेको सरकारले त के ग¥यो भन्ने होइन, बाटो बनाउँदै छ, अहिलेको सरकारले बाटो बनायो । अहिलेसम्म त कसैले त्यहाँ बाटो बनाएको थिएन । अहिलेको सरकारले बाटो बनायो, राम्रो गर्न खोजिराखेको छ, हेलिकप्टरबाट खाद्यान्य पु¥याएको छ । अहिलेको सरकारले त हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्य पु¥याइराखेको छ । आवश्यक सामग्रीहरुको आपूर्ति हेलिकप्टरबाट पु¥याएको छ । केही अनुदानस्वरुप, केही अत्यन्त सस्तो मूल्यमा त्यसरी उपलब्ध गराएको छ । यो त पोजिटिभ कुरा हो भनेर देख्न प¥यो नि ! अनि यस्तोमा पनि विरोध गर्ने केही छन् । विरोधका लागि विरोध गर्ने ? सरकारले राम्रो काम गरिराखेको छ, काम राम्ररी नै गरिराखेको छ ।
नेपाली सेनाले त्यस्तो पहरामा ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिराखेको छ । धन्यवादको एकशब्द छैन । अहिलेको सरकारले गर्न थालेको छ, सेनाले यसरी गरिराखेको छ यस्तो पहरामा हामी त जान सक्दैनौं, सेना पनि त मान्छे हुन् । उनीहरुको पनि ज्यान नै हो । त्यहाँबाट फिस्लिक्क गयो भने त ऊ पनि तल महाकालीमा खस्छ । ज्यान भेटिदैन । हाडखोर केही बाँकी रहदैनन् । धुजाधुजा हुन्छन् । सेनाले त्यसरी काम गरिराखेको छ भने त्यसप्रति कृतज्ञताभाव हुनुपर्दैन ? गर्दैछ यसरी भन्नु पर्दैन ? त्यो देखाउनु पर्दैन ? यसरी गरेको छ, यसरी गरेको छ भनेर समाचार दिनुपर्दैन ? अनि खिचेर त्यहाँको भीर देखाउने ? यो प्रवृत्ति हावी छ । सरकारले राम्रो काम गरेको छ, यस्ता प्रतिकूलताहरुको सामना गरेको छ । त्यसको कुनै चर्चा नगर्ने ? अनि त्यसलाई नराम्रो ढंगले चित्रण गर्ने ? अहिले बाटो बनेको छ, अब यसको विरोध छ, बाटो अझै बनिसकेको त छैन । काम थाल्ने बित्तिकै बाटो बन्छ त ? बन्दैछ नि !
सीमा विवादको बारेमा कुराकानी भएन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको बारेमा...?
तर भारतको चित्त दुखाइ छ नि चीनको इसारामा सरकार चल्यो । चीनले जे भन्यो त्यहीँ मानिराखेको छ वर्तमान सरकारले भन्ने ...?
कार्यदल बन्यो झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ...?
– मेरो नाताको को प¥यो ? तपाईंले यत्रो हल्ला सुन्नुभएको रहेछ नातावाद, क्रिपावाद भयो भनेर म तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो नाताको को प¥यो ? को नियुक्त भयो नाताको ? को अयोग्य मान्छे, योग्यता नपुगेको र क्षमता नपुगेको मान्छे कहाँ पुग्यो ? को प्रतिस्पर्धाबिना गयो ? प्रतिस्पर्धाबिना को त्यहाँ गयो ? छनोटबिना को गयो ? यस्ता हल्लाहरु आपूm परिनँ भन्ने, आफ्नो मान्छे परेन भन्नेहरुले बढी गरेका छन् । तर जस्तो मान्छे भएपनि आफ्नो पर्नुपर्ने कुरा हुँदैन । कम्पिटिसन हुन्छ र लड्नुपर्छ, कम्पिटिसनमा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । अब्बल ठहरिनु पर्छ र नियुक्ति लिनुपर्छ ।
– म सोध्दै छु नि ! मैले कुनचाहिँ आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेँ ? सम्धी हुनुअघिकै प्राध्यापक डाक्टर ।
तपाईंको प्रतिपक्षी दलका नेतासँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । अझ पछिल्लो समय सुमधुर सम्बन्ध ...छ ?
तपाईंको एउटा दृढ इच्छाशक्ति छ, विचार छ, देशलाई विकास गर्छु, आमूल परिवर्तन गर्छु, समृद्धिको एजेण्डालाई अगाडि बढाउछु भन्नु भएको छ । तपाईं सफल हुनुभयो साढे दुई वर्षमा ? सोचेअनुसार काम गर्न सक्नुभयो तपाईंले ? ठ्याक्कै आज नेपाली जनतालाई बताइदिनुस् ...?
तपाईंले प्रस्ट रुपमा भन्नु भएको छ, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र अनुहार पनि हेर्दिन । तर ...?
– जस्तो भ्रष्टाचारको चर्चा चल्नेबित्तिकै अख्तियारलाई मैले भनेको छु, तपाईँहरु तुरुन्त छानबिन गर्नुस् । अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । कोही पनि दोषी पाइनेबित्तिकै कारबाही हुन्छ । दोषीहरुलाई कारबाही भइराखेको छ । कसैले नखाए पनि हुन्छ, यति पैसा गयो भन्नेबित्तिकै आरोपित गरिएको छ । जस्तोकि तल्लो स्थानीय निकायमा पैसा पठाइयो । खोई पैसा ? खोई पैसा ? भनेर भनिएको छ । स्थानीय तहमा पठाएको हो, घरघरमा त जाँदैन त ! स्थानीय तहमा पठाइएको हो । अब त्यहाँ उनीहरु क्वारेन्टिन बनाउँदै छन् । खाना खुवाउँदै छन् । त्यसको हिसाबकिताब त आउने समय हुन्छ नि ! अनि खोई हिसाबकिताब भनेको छ । उपचार गर्न थालौं कि हिसाबकिताब गर्न थालौं, अहिले... ?
– यो बेकारको कुरा हो क्या ! कहाँ सलबलाए ज्ञानेन्द्र शाह ? कुनै मन्दिरमा गएको सलबलाएको हो र ? अब उनका पछाडि लागेर केही खान पाएका केही मान्छेहरुचाहिँ जो केही बोल्नु, भन्नु भनेको वा त्यस्तो भइदिएहुन्थ्यो, अनि खाउँला भन्नेहरु केही होलान् । राणा शासन आइदिए हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि अहिलेसम्म होलान केही मान्छेहरु । पञ्चायत फर्किदिए हुन्थ्यो भन्ने अहिलेसम्म केही होलान् मान्छेहरु । त्यसका त हुन्छन् नि अवशेषहरु । त्यस्ता अवेशेषहरु हुन्छन् । तर, मलाई ज्ञानेन्द्र शाहलाई खूदै जनताले टिपेर मिल्काएको राजतन्त्र फेरि फर्काउँछन् भन्ने त्यस्तो आशा होला भन्ने लाग्दैन । अरु कसैले ल्याएर सत्तासीन गराइदिन्छ भन्ने लागेको छ भनें यो मध्ययुग पनि होइन । अहिले जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् । अन्त कतैबाट ल्याएर सत्तासीन गराइदिन्छन् भन्ने अपेक्षा भ्रम पनि छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन । अब त्यस्तो भ्रम छ भनेर त्यस्ता गतिविधिहरु देखियो भने त्यसलाई त ....!